N'Anambra, NSCDC Ejidela Mmadụ Abụọ Maka Mmanụọkụ Adịgboloja - Igbo News | News in Igbo Language
Jul 13, 2021 - 15:31
Ndị ụlọọrụ nchekwa a maara dịka 'Nigeria Security and Civil Defence Corps' (NSCDC), ngalaba steeti Anambra, ejidela ma kpụgharịa mmadụ abụọ maka izuru mmanụọkụ adịgboloja (kerosene) na ịkpà nkàtà ịchọ ka ha ga-esi bupù ma ree ya.
Onyeisi ụlọọrụ NSCDC na steeti Anambra, bụ Maazị Vincent Ogu kwupụtara nke a n'okwu ọ gwara ndị ntaakụkọ n'isi ụlọọrụ ahụ dị n'Awka oge ọ na-akpụgharị mmadụ abụọ ahụ
O nyere aha mmadụ abụọ ahụ dịka Chukwuebuka Kalu and Solomọn Ogbonna, ma mee ka a mara na ọ bụ ndị ngalaba ụlọọrụ ya na-ahụ maka ibu agha megide imebisi ihe (bụ ngalaba 'Anti-Vandalism Squad') gbachibidòrò ma nwụchikọọ ndị ahụ na mpaghara okporoụzọ awara-awara ahụ siri Onitsha gaa Owerri, n'Ihiala dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Ihiala.
O kwuru na ndị ọrụ ya ahụ nwụchìkọkwàrà ụgbọala nwere akara steeti Lagos 827YD ka o bùkwà mmanụ ụgbọala dịzụụl n'Ọkịja dịkwa n'okpuru ọchịchị ime obodo Ihiala ahụ; ndị ahụ wee bihapụ ma ụgbọala ha ma mmanụ dịzụụl ahụ ha bu, wee rie mbọmbọ ọsọ, nke na-egosi na aka ha adịghị ọcha banyere ya bụ mmanụ ha bu n'ụgbọala.
Dịka ọ na-enyekwu nkọwa banyere arụrụala ahụ ndị ahụ, Maazị Ọgụ katọrọ mpụ na arụrụala na-arịzị ibe ya elu ugbua na mpaghara ebe dị iche iche n'ala Nigeria, ma kpọkuo ndị ọbụla na-etinye aka n'ihe na-eweta ala adịghị mma ka ha kwakọrọ ngwongwo ha si na steeti ahụ pụọ, maka na ọnọdụ adịrịghị ha na steeti ahụ.
Ọ gara n'ihu kwuo na ụlọọrụ ya etinyesiela ndị ọrụ, akụrụngwa na atụmatụ nlekọta bụ ịgbà na mpaghara ebe dị iche iche e si abata ma na-apụ na steeti ahụ, n'esepughị aka, ma n'ụtụtụ ma n'anyasị, kwà ụbọchị ọbụla.
O kelere ọchịchị steeti Anambra nà aka na-achị steeti ahụ bụ Gọvanọ Willie Obianọ maka mbọ dị iche iche ọ gbagoro na ezi ihe dị iche iche ọ rụgoro n'ịkwàlite ọnọdọ nchekwa steeti ahụ, ọkachadị site n'ịkwàdò ndị ọrụ nchekwa na ụlọọrụ nchekwa niile dị na steeti ahụ ma kpọkuo ya ka o jisie ike n'ọrụ; ọbụladị dịka o kwere nkwà na ụlọọrụ ya agaghị ada mbà n'ọrụ.
N'ajụjụọnụ a gbara ya, otu onye n'ime mmadụ abụọ ahụ e jidere, bụ Maazị Solomon Ogbonna kwetara ma kwuo n'ezie na ihe o mere adịghị mma, ma rịọkwazie ka a agbaghara ya.
N'Ebenator, Ezenagụ Ekesàárala Ndị Mmadụ Akpa Osikapa Ruru 300